“Sida ay ugu go’een shaqada ururkeena ayagoo u adeegaya nabadadda iyo dadka baahan waxay noo tahay dhiirrigalin annaga dhammaanteen.”
— Waxaa sidaas yiri Ban Ki-Moon, Xog-Hayaha Guud ee Qaramada Midoobay (2007 – 2016) asagoo faallo ka bixinaayay IDG
Kusoo dhawaada IDG.
Waxaan bixinaa adeegyo badbaadin oo awood usiiya macaamiisha caalamiga ah, kuwa ganacsiga iyo kuwa ururrada aan dawliga ahayn si ay u daba galaan hawlahooda ah gudaha gobollo caqabado badan oo xaalad qallafsan ku jira oo dunida ka tirsan
Ku saabsan IDG
— Xaqiijinta badbaadada iyo sii wadidda hawlgalka ee loogu tala galay goobaha daafaha caalamka ah.
Waxaanu la shaqeynaa macaamiil ka duduwan, oo ka socda QM iyo shaqalaha hoteellda, si loo helo deegaan wanaagsan oo loogu tala galay shaqaalaha, soo booqdeyaasha iyo martida jooga meelaha halista badan ee fogfog.
K9 Badbaadada Iyo Dareemidda Walxaha Qarxa
— Badbaadinta dadka iyo goobaha ayadoo la isticmaalayo eeyo si gaar ah u tababaran.
Eeyaheenu waxay hal koox isla yihiin dad la tacaamula oo khibrad u leh si loo abuuro kooxo eeyo oo gaar ah loogu tala galay dareemidda walxaha qarxa iyo roondeynta intaba.
Tababarka Iyo Dhismaha Awoodda
— Dhismaha awoodda ayadoo la horumarinaayo awoodda iyo xirfadaha sugidda ammaanka shaqaalehiina.
Tababarka ammaanka ee IDG wuxuu siiyaa dadkiina aaladaha aay u baahan yihiin ee loogu tala galay dhimidda halista iyo badbaadinta ururkiina.
Maareynta Halista Dhanka Ammaan Darrada Ka Imaanaysa
— Dhimidda halista aad beylahda u tahay, annagoo u dhabar adaygayna dhibaatooyinka oo badbaadinayna nafafyaalka.
Waxaanu xaqiijinaa inuu ururkaagu diyaar u yahay inuu wajaho dhibaatooyin imaan kara ayadoo la adeegsanayo ka hortag, qorsheynta kediska ah, tijaabinta iyo qiimeynta.
Ilaalinta Goobaha Xiran
— Shaqaale badbaado oo aad u tababaran oo la heli karo oo heegan ah.
Ayagoo ka shaqeeya meelo halis badan leh ayaa shaqaalaha ammaanka ee IDG waxay bixiyaan shaqaale ammaanka ka shaqeeya oo aad u tababaran kuwaasi oo heegan u ah badbaadinta macaamiisha.
हामी जस्तो कोही पनि छैन
(Ma jiro qof annaga nala mid ah)
Annagoo ka socona dhaqan lagu asaasay qiyamyada Guutada loo yaqaano Gurkhas ee Ciidammada Ingiriiska, hadda waxaanu shaqaaleysiinaa shaqaale kala duduwan oo ka kala socda qeybaha kala duwan ee caalamka.
Waxaa na mideeya dareen mas’uuliyadeed oo aanu u qaadnay macaamiisha aanu u adeegno, iyo mas’uuliyad aanu isu qaadnay annaga dhexdeenu. Ballan qaadkeena aanu la galayno bulshooyinka aanu ka dhex shaqyno, iyo heerarkeena anshaxa ee ka badan sida caadiga ah ayaanu ururrada kale uga horreynaa.
Wax badan ka ogoow IDG